Ezinganeni eziningi emhlabeni ithoyizi emhlabeni ethandwa kakhulu ezithambile - bear. Manje Teddy waba ngomunye kakhulu futhi isipho romantic ukuthi ungakwazi ukwethula intombazane Day Valentine. Lokhu kudayisa Kulula ukuthola amabhere zonke osayizi, futhi seamstresses thunga amathoyizi abathandekayo bazo ngisho kusukela candy wrappers (tack indwangu).
Sizokwenza isikhumbuzo encane teddy uthela. Lezi zinto ezincane zingenza kufanele inikezwe njengoba a keepsake, futhi nje ukuhlobisa ingaphakathi yabo. Futhi ingasetshenziswa inhloso yazo - ukudlala.
Iphethini amathoyizi ezithambile yakhelwe ukusebenza Indwangu kunalokho mncane. Uma ufuna ukuthwala izinwele ezinde, funa zokulala kanokusho. Futhi ingxenye engcono lapha ubukeka zonke wawungathi efanayo noma wazizwa.
Khulisa isithombe njengoba ufisa, uyiphrintele. Ngo abakaki phambi izinhlamvu unikezwa isilinganiso esifanele ngokuningiliziwe. A - esiswini, B - isidladla eliphezulu - engxenyeni isilinganiso ikhanda, D - ohlangothini ingxenye ikhanda, D - Indlebe, E - yedwa imilenze ephansi, F - esifubeni aphansi, H - ngezinyawo phansi, futhi - emuva.
Lapho esibonelweni amathoyizi ezithambile ngeke adluliselwe indwangu, abhanqiwe izingxenye ziyalingana ukwenza, okungukuthi, ukuvula. Lapho bobabili kumelwe abe hlangana neengcezu sokunene nesobunxele. Lapho amane - ezimbili ngakwesokudla sahamba. Ungakhohlwa mayelana umphetho. Abakwazi ukwenza okungenani, kodwa uma le ndwangu kuba aminyene futhi akusho sidilike.
Ingxenye ngayinye yezinkulungwane bear lethu ithungwe ngokwehlukana umzimba. Qala nge umzimba ngokwenza tuck ku esiswini emuva. Khona-ke ukuxhuma izingxenye ndawonye E, F; imicibisholo kufanele kwenqatshwa. Lapho elula, shiya kunesikhala for a Goal nokuthola imininingwane yakho.
Manje ungenza ikhanda lakho. Ukuphela oyindilinga wengxenye phakathi impumulo ithungwe. Lapho iphethini ithoyizi ezithambile has emakhoneni ebukhali, wenze notch. Khona-ke imininingwane edingekayo kuyoba lula ukuthi baphume. Beka ukugxusha ikhefu entanyeni. Ekupheleni bahlanganise enhla nomhlane nasezithweni teddy bear.
I yamathebhu ingasetshenziswa tintfo letitinhlobonhlobo. Kuyadingeka kuphela okufanele zicatshangelwe kangaki wena ugeza ithoyizi. Torso futhi ikhanda laligcwele phama baqaphe kakhulu nasemilenzeni.
Buka lesitfombe, njengoba imilenze ithungwe. Engxenyeni engenhla cishe alinalutho. A umphetho ubabonisa emhlabeni, kunokuba ngaleso iphuzu elilodwa noma umugqa. Njengoba kuvela namandla futhi zemvelo ebukeka xaxa. Ekupheleni embroider amehlo kanye nekhala, entanyeni Tie yakhe iribhoni.
Ukuze umhlobiso ingaphakathi kungcono ukwenza amawundlu imibala ehlukene, ezicutshini ukuhluka. Uma ahlinzekwa Emfanekisweni iphethini amathoyizi ezithambile sizosetshenziswa ngesayizi egcwele, ungenza lukhulu lamawundlu ukuze enze isixha sezimbali romantic. Thatha ngaphezulu ezifanayo ezinemibala kudabuke nezimbali yokufakelwa, silungise konke nge hot ncibilikisa glue wire ezimibalabala. Qoqa e isixha, bopha iphepha futhi tie iribhoni. Lokhu isixha kungcono sokulungiselela kusengaphambili, ngoba Bears ukwenza isikhathi eside. Kodwa yena waqhubeka isikhathi eside kakhulu kuneminyaka imibala abavamile.
Njengesipho sosuku lokuzalwa umntwana Asia efanayo ethandwa ithoyizi ezithambile - panda. Ukuze wenze panda-bear, ukwandisa ububanzi iphethini ezindlebeni futhi isiqu, futhi izingxenye ohambelana bafa ngendwangu ngombala omnyama nomhlophe. Ngezinye panda ikhanda mhlophe futhi isisu, black iso "izibuko", nengxenye yalo engemuva kumele kube umsila.
Omthende Cinnamon - edume Russian apula izinhlobo